‘अर्बौ पैसा कमाउन र चीनको अर्थतन्त्रलाइ डामाडोल गर्न, यी दुई देशले रचेको ष’ड्यन्त्र हो कोरोना भाइरस’! – " सुलभ खबर "
‘अर्बौ पैसा कमाउन र चीनको अर्थतन्त्रलाइ डामाडोल गर्न, यी दुई देशले रचेको ष’ड्यन्त्र हो कोरोना भाइरस’!
मोहिनी रिसाल – चीनमा फैलिएको प्रा’णघा’तक कोरोना भाइरस स”ङ्क्रमणबाट आजसम्म कम्तीमा पनि १ हजार ५०० जनाको ज्या’न लिइसकेको छ । चीनले यो भाइरसको नियन्त्रणका लागि सक्दो प्रयास गरेको छ, तर पनि यो प्रकोप घट्ने संकेत कतैबाट पनि देखिएको छैन ।
वैज्ञानिकहरुले कोभिड–१९ नाम दिएको यो भाइरसको नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीका लागि २६ अर्ब युआन विनियोजन गरेको चिनियाँ अधिकारीहरूले जनाएका छन् । उनीहरुका अनुसार यस भाइरसविरूद्ध लडिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई थप सुरक्षित गर्न र उनीहरुको अवस्था सुधार गर्न बिहीबारसम्म २६ अर्ब युआन (करिब तीन अर्ब ७१ करोड अमेरिकी डलर) विनियोजन गरिएको छन् ।
चिनियाँ अर्थ मन्त्रालयका सहायक मन्त्री ओउ वेनहानले शुक्रबार चिनियाँ राजधानी बेइजिङमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो जानकारी दिनुभएको हो । यस रकमबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण र सुरक्षा सामग्री खरीद गरी चिकित्सा संस्थामा आवश्यकताअनुसार सुविधा बढाइने छ । सरकारले म’हा’मारी नियन्त्रणमा विरुद्धको ल’डा’ईमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने चिकित्सा टोली र व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गरिरहेको जनाएको छ ।
सोही पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार चीनमा यस भाइरसको उपचारका क्रममा खटिएका कम्तीमा पनि १ हजार ७१६ स्वास्थ्यकर्मी स’ङ्क्र’मि’त भएका छन् । राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोग (एनएचसी) ले पनि शुक्रवार यस बारेमा जानकारी गराएको थियो । उक्त आयोगले यो संख्या यहाँ यस स’ङ्क्र’मण पुष्टि भएका चिनियाँ बिरामीको संख्याको करिब ३.८ प्रतिशत हो ।
यसबाट स’ङ्क्र’मण भएर छ जना स्वास्थ्यकर्मीको उपचारका क्रममा निधन समेत भइसकेको छ । कोभिड–१९बाट स’ङ्क्र’मण भएका स्वास्थ्यकर्मीमध्ये १ हजार ५०२ जना त भाइरसको उद्गमस्थल हुबेई प्रान्तकै रहेका चीनले जानकारी गराएको छ । हुबेईको प्रान्तीय राजधानी उहान सहरमा सबैभन्दा धेरै १ हजार १०२ जना स्वास्थ्यकर्मी स”ङ्क्र’मित रहेका बताइएको छ ।
यस भाइरसको प्रकोप नियन्त्रणका लागि विश्वले चीनलाई साथ दिने बताइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, युरोपेली युनियनमात्र नभएर विश्वका नेताहरुले पनि यो स’ङ्क्र’मणको नियन्त्रणमा सघाउने प्रतिबद्धता चीनलाई दिएका छन् । तर पनि यो सहयोग एवं आश्वासनसँगै उता स’ङ्क्र’मण झनै फैलिएको छ । चीनलाई विश्वका कैयौँ देशले यात्रामा प्रतिबन्धदेखि चीन हुदै यात्रा गर्ने क्रम पनि रोकेका सूचनाहरु जारी गरिरहेका छन् । यससँगै यसबाट ज्या’न जानेको तथ्यांक हरदिन बढ्दै आएको चीनबाटै प्राप्त समाचारहरुमा जनाइएको छ ।
चीनलाई यसैहप्ता मात्र पनि ग्रुप–७७ समूह, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले सहयोग गर्ने जनाएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघले चीनलाई आवश्यक पर्ने सहयोग उपलब्ध गराउने आवश्वासन दिदै यस भाइरसको प्रकोप रोक्न चीनको साथमा रहने बताएका थिए । उनीहरुले यस प्रकोप नियन्त्रणका लागि चीनले गरेका प्रयासको सराहना पनि गरेका थिए । हालसम्म चीनले यो भाइरसको नियन्त्रणका लागि गरेका प्रयासको सराहना उनीहरुले गरेका छन् । यसका साथै उनीहरुले चीनले आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए ।
चिनियाँ नागरिक मामिला मन्त्रालयका अधिकृत चेन येलिङका अनुसार चीन सरकारले हरेक समूदायका लागि औसतमा आठ जना सामुदायिक कार्यकर्ता परिचालित गरेको छ । उसले कतै पनि कुनै जनशक्ति, स्वास्थ्य स्वयंसेवक, चिकित्सक तथा अन्य आवश्यक औषधि र सामग्रीहरुको खाँचो हुन दिएको छैन । उहाँले हरेक सामुदायिक कार्यकर्ताले औसतमा ३०० स्थानीय बासिन्दालाई हेर्ने गरेको जानकारी दिँदै स्थानीय नागरिकलाई प्रत्यक्ष रुपमा हेर्न यो संख्या हालसम्मका लागि पर्याप्त नै रहेको बताउनुभयो । यो प्रकोप नियन्त्रणका कार्यको निरीक्षण हरेक समुदायमा त्यसको माथिल्लो निकायबाट भइरहेको र आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरुको संख्या बढाइने गरेको जानकारी पनि दिनुभयो ।
यसैगरी तान्जानियाका राष्ट्रपति जोन माग्फुलीले पनि चीनले अहिलेको अवस्थामा धैर्यता र रक्षात्मक उपायहरुका साथ हालको संकटपूर्ण घडीको सामना गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले आफू र आफ्नो देशको तर्फबाट जेजस्तो प्रकारको सहयोग आवश्यक परेपनि आफू तयार रहेको बताउनुभएको छ ।त्यस्तै नेदरल्याण्डका प्रधानमन्त्री मार्क रुटले चीनको सरकार र यहाँका नागरिकसँग ठूलो साहस र धैर्यताका साथै काम गर्नसक्ने क्षमता रहेको भन्दै प्रसंशा गर्नुभएको छ ।
हाल चीनले यो स’ङ्क्र’मणको नियन्त्रणमा जारी राखेका प्रयासहरु उसले आफ्नो देशका नागरिकका लागि मात्र नभएर सबैको हितमा हो भन्नुभएको छ । यस्तो चिनियाँ अभियानमा हामी सबैले सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ । पोर्चुगलका राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डि सोउसाले पनि चीनलाई सान्त्वना दिनुभएको छ । उहाँले पनि चिनियाँ प्रयासहरुको सराहना गर्दै यो समस्याबाट चीनले छिट्टै नै मुक्ति पाउने पनि बताउनुभएको छ ।
ग्रिक राष्ट्रपति प्रोकोपिस पाभ्लोपाउलसले यस भा’इरसबाट ज्यान गुमाउने चिनियाँ नागरिकप्रति दुःख व्यक्त गर्दै महामारी नियन्त्रणका लागि आफ्नो देशले पनि सक्दो सहयोग गर्ने आस्वासन दिनुभएको समाचारमा जनाइएको छ । यसैगरी अल्जेरिया, इथियोपिया तथा अइरिस प्रधानमन्त्रीहरुले पनि चीनलाई सान्त्वता दिँदै यस प्रकोपको नियन्त्रण एवं निवारणका लागि आफ्नो तर्फबाट सबै प्रकारका सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ ।
उहाँहरुले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यमा आ–आफ्नो देशबाट आवश्यक प्राविधि तथा आर्थिक सहयोग दिने बताउनुभएको छ । हाल चीनले यो प्रकोप रोक्न निकै कडा मेहनत गरेर काम गरिरहेको सबैका भनाई छ । गत वर्षको अन्त्यतिरबाट चीनमा देखिएको यो नयाँ भाइरस द्रुतरूपमा फैलिएपछि चिनियाँ भूमिमै १ हजार ४०० जनाको निधन भइसकेको छ । शनिबार प्राप्त एक समाचारअनुसार यस भाइरसबाट चीनभरीमा करिब ६० हजार व्यक्ति स’ङ्क्र’मित भएका छन् । भाइरसको सुरुआत भएको प्रमुख स्थानका रूपमा रहेको हुबेई प्रान्तमा यस भाइरसबाट बढी नागरिक प्रभावित छन् ।चीनका नौ अस्थायी अस्पतालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको सेवा सुरु
चीनको मध्य भागमा पर्ने हुबेई प्रान्तमा नौ ओटा अस्थायी अस्पताल सञ्चालन हुन थालेका छन् । कोरोना भाइरसको स’ङ्क्र’मण अत्यधिक धेरै रहेको यस क्षेत्रमा सुरु गरिएका ती अस्पतालहरुमा ६ हजार ९६० शैया रहेका छन् ।
चिनियाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोग (एनएचसी) का अधिकारीहरुले दिएको जानकारीअनुसार ती अस्पतालहरुमा कोरोना भा’इरसबाट स’ङ्क्र’मित ५ हजार ६०६ जनाको उपचार भइरहेको छ । उहानमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एनएचसीका उपप्रमुख वाङ हेशेङले नयाँ अस्थायी अस्पतालहरु सुरु भएको जानकारी दिनु भएको हो ।
अस्थायी अस्थालमा सेवा सुरु भएर सेवा पाउन थालेपछि कोरोना भाइरस स’ङ्क्र’मितहरुले राहत महसुस गरेका छन् । रोगको प्रकोप न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न यी अस्पतालहरुबाट उल्लेख्य सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । बिरामीहरुले राम्रो उपचार सेवा पाईरहेको बताएका छन् भने कतिपय विरामीहरु उपचारपछि घर फर्किएका छन् ।कोभिड–१९ नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीका लागि २६ अर्ब युआन विनियोजन
चिनियाँ अधिकारीहरूले नयाँ कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरूद्ध ल”डिरहेका स्वास्थ्यकर्मीको काम गर्ने अवस्था सुधार गर्न बिहीबारसम्म २६ अर्र्ब युआन (करिब तीन अर्ब ७१ करोड अमेरिकी डलर) विनियोजन गरिएको एक वित्त अधिकारीले बताएका छन् ।
सबै अग्रमोर्चामा काम गर्ने स्वास्थ्य तथा म’हा’मारी रोकथामका लागि खटिएका व्यक्तिले जोखिममा काम गरेबापत कामका आधारमा प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति २०० युआनदेखि ३०० युआनसम्म थप भत्तास्वरूप प्रदान गरिने उहाँले बताउनुभयो । बजेटलाई केन्द्रीय सरकारले नै उपलब्ध गराउने ओउले भन्नुभयो ।
कानुनी अधिकार र चिकित्साकर्मीहरूको हितको रक्षा गर्ने प्रयासलाई जोड दिँदै ओउले भन्नुभयोे, “कोभिड–१९को स’ङ्क्र’मणबाट हुने निमोनियाबाट प्रभावित चिकित्सा कर्मचारीहरूले व्यावसायिक चो’ट’प’टक’का लागिसमेत क्षतिपूर्ति पाउनेछन् ।”
“म’हा’मारी वि’रुद्धको ल’डा’ईमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने चिकित्सा टोली र व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ र तुरुन्तै सम्मान गर्नुपर्छ,” ओउले भन्नुभयो । अग्रमोर्चामा काम गर्ने चिकित्साकर्मीहरूलाई प्राप्त हुने आर्थिक सहायता र लाभांशलाई व्यक्तिगत आयकरमा छुट दिइनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।अर्बौ पैसा कमाउन र चीनलाई कमजोर बनाउन यी दुई देशले रचेको ष’ड्यन्त्र हो कोरोना भा’इरस’
एजेन्सी । अरबका दर्जनौँ मिडिया रिपोर्टका अनुसार अमेरिका र इजरायले चीन विरुद्धको आर्थिक र मनोवैज्ञानिक ल”डाईको रूपमा घातक कोरोनाभाइरसको निर्माण गरेको र फैलाएको आरोप लगाएका छन् ।
साउदी दैनिक समाचार पत्र अल–वटानको एउटा रिपोर्टमा यो दावी गरिएको छ छ कि अमेरिका र इजरायलबाट कोरोनाभाइरसको विकास गरिएको हो, यो कुनै संयोगको कुरा होइन । तर, अमेरिकामा पनि कोरोना भा”इरसका सं क्रमितहरु बढी रहेको खबर बाहिर आएको छ ।
रिपोर्टमा भनिएको छ,‘यस्तो ख”तरनाक भा”इरसको विकास चीनमा मात्रै किन भयो । यस्ता भा”इरस अमेरिका र इजरायल जस्ता देशमा किन भेटिएनन् । पहिला पनि उनीहरुले इजिप्टमा त्यस्ता भाइरसको विकास गरेका थिए । गरिब देश जुनमा उनीहरुको केही सम्बन्ध नै छैन त्यस्ता देशमा यस्ता भा”इरसको विकास गरेर उनीहरुलाई फाइदा पनि छैन ।’
रिपोर्टमा भनिएको छ,‘जब इजिप्टले पोल्ट्रिफर्मका लागि आफु सक्षम रहेको र अन्यन्त्रबाट ल्याउन नपर्ने घोषणा गर्यो । केही समय पश्चात नै उक्त देशमा भाइरस देखियो । एभियन ”फ्लु’का कारण इजिप्टको पोल्ट्री फर्म चरम सं”कटमा पुगेको थियो । इजिप्टले अमेरिका र फ्रान्सबाट ठुलो संख्यामा कुखुरा आयात गर्दै आइरहेको थियो । जब उ आफ्नै सक्षम भयो तब उसको देशमा ‘फ्लु”को समस्या देखियो ।’
सिरियाबाट प्रकाशित हुने अल–थरा दैनिकले लेखेको छ,‘कोरोना भा”इरस अमेरिका–चीन यु”द्धको एउटा भाग हो । यसले निम्त्याउने वि’नाश भ’यानक छ इ”बोला, जि”का, सा”र्स, ए”भियन लगायत अन्य भाइरसहरु यो सबै अमेरिकाले विकास गरेको भाइ”’रसहरु हुन् । पछिल्लो समय विश्वलाई आफ्नो नियन्त्रणमा बनाउन वा ध”’म्की दिन यस्ता भाइरसको विकास भइराखेको छ ।’
एक इजिप्ट न्युज साइट भेटोगेटले एउटा सिद्धान्तका आधारमा भनेको छ,‘चीनको वुहानलाई केन्द्र बनाएर किन को”’रोना भाइरस फैलियो । रिपोर्टमा भनिएको छ,‘अमेरिकन उद्योगहरु यस्ता भाइरस निर्माण गर्न जहिले अग्रसर छन् । भिरुलेन्ट स्मलपक्स देखि बुबोनिक प्लेग भा”इरसहरु पछिल्लो समय विश्वले देखिसकेको छ ।’ उक्त साइटले भनेको छ,‘ वुहान एक औद्योगिक शहर हो । तर, अन्य शहरभन्दा यो शहर चीन सरकारको त्यति महत्वमा परेको छैन । यो क्षेत्रमा अ”प”राधका घटना घटाउन र रच्न विदेशीहरुलाई सहज हुने गरेको छ ।’
रिपोर्टमा भनिएको छ,‘गुञ्जाओ, बेइजिङ, टियानजिङ, हङकङ चीनका प्रमुख शहर हुन् । अन्य प्रमुख शहरमा आफ्नो प्रभाव नपर्ने भएका कारण उनीहरुले वुहान रोजेका हुन् ।’चीनमा फैलिएको यो म”हामारीका कारण उपचार र औ”षधीमा ठुलो खर्च हुने र ती औ”षधीहरु इजरायलमा म्यानुफ्याकचरिङ हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ ।हालसम्म चीनमा यो भाइरसका कारण १०१८ जनाको निधन भइसकेको छ भने ४४ हजार जना सं”’क्रमित भएका छन् ।